भुवन केसी–जियाको सम्बन्ध (हेरौँ १९ तस्बिर) ?
रामजी ज्ञवाली (नारी कान्तिपुरबाट साभार)
उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् । केसी चलचित्रका सर्वा्धिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् । उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् । दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको रहस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।
सुस्मिताले ‘करोडपति’ बाट डेब्यु गरेकी हुन् । भुवनसँगको विवाहपछि सुस्मिताले छोरा अनमोललाई जन्म दिइन् । सुस्मिताको व्यवसायिक जीवन राम्रो गतिमा अघि बढिरहेकै बेला भुवनसँग भने ठाकठुक पर्न थाल्यो । बिस्तारै उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । अन्ततस् उनीहरू कानुनी रूपमै अलग भए । सुस्मिताको पछिल्लो चलचित्र पिंजडा ब्याक अगेन केही समयअघि मात्र प्रदर्शनमा आएको थियो । यो जोडीका एक मात्र सन्तान अनमोल केसी अहिलेका सबैभन्दा चर्चित अभिनेता हुन् । भुवनले दुईवटा विवाह नटिकेकै कारण तेस्रो विवाहप्रति अनिच्छा देखाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनी जियालाई एकदमै मिल्ने साथीमा सीमित राख्न चाहन्छन् ।
भुवन बिन्दास स्वभावका अभिनेता हुन । अनमोल चम्किएसँगै भुवन निकै खुसी छन् । केसी भन्छन्, ‘अनमोल नेपालको पहिलो त्यस्तो सेलिब्रेटी हो, जसको जत्तिको स्टारडम अहिलेसम्म कसैले कमाउन सकेन ।’ अनमोलको कामप्रति आफू निकै खुसी र सन्तुष्ट भएको उनी बताउँछन् । भुवनले अनमोललाई आफ्नो इसारामा चलाइरहेको आक्षेप पनि नलगाइने होइन, तर भुवन भन्छन्, ‘अनमोल मेरो छोरा मात्र हो, बाहिरी दुनियाँका लागि ऊ कलाकार हो, उसलाई अभिभावकका हिसाबले सम्झाउने र सुझाव दिनेबाहेक म अरू कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ । उसको जीवनमा उसकै डिसिजन चल्छ ।’ भुवनका अहिले दुई सारथि छन्ः अनमोल र जिया । यी दुई पात्रले भुवनलाई परिवारमा कसैको अभाव महसुस हुन दिएका छैनन् ।
कतिपय जिया र भुवनको विवाह हुने सम्भावना प्रबल छ भन्छन् भने कतिले उनीहरू अहिले जुन हिसाबले सम्बन्ध अघि बढाइरहेका छन्, त्यसमै सीमित हुन्छन् पनि भन्छन् । उनीहरूको घरमा निरन्तर पुग्ने एक चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘जिया र भुवनजीलाई मैले धेरै समयदेखि साथै देखिरहेको छु, विवाह नभए पनि उहाँहरूबीच राम्रो तालमेल भए सक्किगो नि ।’ कुनै बेला जियाले आफू ‘भुवनसँग विवाह गर्न तयार रहेको’ बताउँदा त्यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइएको थियो ।